Izay rehetra tokony ho fantatrao momba ny iOS 9 | Vaovao IPhone
iOS 9 dia teto nandritra ny ora vitsivitsy. Nandritra izay volana maromaro izay, hatramin'ny nanambarana azy tany amin'ny WWDC tamin'ny volana Jona, niresaka momba ny vaovao ao anatiny izahay, nanandramana ireo beta natombok'i Apple, nasehonay anao ny horonan-tsary sy ny pikantsary momba ny menusany. Fa mba hamitana an'ity fandrakofana ny famoahana ny iOS 9 vaovao ity dia nanomana lahatsoratra be dia be izahay valiny amin'ireo fanontaniana napetraka matetika.
1 Inona avy ireo fitaovana tohanana?
2 Inona no vaovao amin'ny fampiharana Apple?
3 Inona avy ireo fiasa vaovao tafiditra ao?
4 Misy vaovao momba ny filaminana ve?
5 Misy zavatra mora alefa amin'ny Android mankany amin'ny iOS mora foana?
6 Ahoana no fiantraikan'ity fanavaozana ity amin'ny bateriko?
7 Inona no atao hoe fanampiana mavitrika?
Inona avy ireo fitaovana tohanana?
Ireo fitaovana rehetra nametraka ny iOS 8 dia mifanaraka amin'ny iOS 9. Apple dia tsy namela olona tao amin'ny tatatra tamin'ity indray mitoraka ity. Ny lisitr'ireo modely feno izay azo havaozina amin'ity kinova ity dia:
iPhone 4S, 5, 5s, 6, 6 Plus, 6s ary 6s Plus
iPod Touch 5G sy 6G
iPad 2, 3, 4, Air, Air 2, Mini, Mini 2, Mini 3, Mini 4 ary iPad Pro
Inona no vaovao amin'ny fampiharana Apple?
iOS 9 dia mety tsy mampiditra endri-javatra vaovao be loatra ho rafitra (izay tsy tena marina), fa ny fampiharana teratany izay ampidirin'i Apple amin'ny alàlan'ny default dia misy fiasa vaovao maro:
Ny sarintany dia misy fampahalalana momba ny fitateram-bahoaka ihany (na dia voafetra amin'ny tanàna sasany aza).
Tsy misy intsony ny passbook ary antsoina hoe Wallet izao
Tsy misy koa ny kizabe ary antsoina hoe News (any amin'ny firenena sasany amin'izao fotoana izao)
Ny note dia nihatsara be ary tsy fampiharana tsotra izao hanoratana lahatsoratra, azonao atao ny mampiditra rohy, sary, manova ... miasa matetika kokoa amin'ny mpandika teny noho ny fampiharana Notes izay fantatsika hatreto.
Inona avy ireo fiasa vaovao tafiditra ao?
Nihatsara i Siri, ary hanome sosokevitra anay aza tsy mangataka akory. Azonao atao ny mitady sary sy horonan-tsary voatahiry ao amin'ny fitaovanao amin'ny daty, toerana, sns. Azonao atao ihany koa ny mikaroka mozika amin'ny alàlan'ny lohateny na mpanakanto, ary azonao atao ny mahalala izay ataonao amin'ny fotoana rehetra hametrahana fampahatsiahivana momba izany hetsika izany.
Malina kokoa ny karoka ary ankehitriny dia eo an-kavanan'ny solaitrabe no anolorantsika azy, miaraka amin'ny tolo-kevitra ho an'ny fifandraisana, fampiharana, vaovao, sns. ary azontsika atao ihany koa ny mitady na dia ao anatin'ny fampiharana aza (raha toa ka havaozina ho an'ity asa ity izy ireo)
Tonga ihany ny multitasking an-tserasera amin'ny farany, na dia ho an'ny iPad fotsiny ary ho an'ny modely sasany. Slide Over, Spñlit View ary PiP dia fiasa vaovao telo tonga amin'ny iPad ary hazavainay amin'ny Ity lahatsoratra ity antsipiriany bebe kokoa.
Ny iPad izao koa dia manana fiasa nohavaozina "trackpad" amin'ny klavier, izay ahafahanao mivezivezy amin'ny alàlan'ny lahatsoratra ary misafidy azy mora kokoa kokoa.
Misy vaovao momba ny filaminana ve?
Ny fanamarinana roa-dingana dia ny rafitra fiarovana ambaratonga voalohany ho an'ny iOS 9, izay manasarotra ny fampiasana tsy ara-dalàna ny kaontinao. Raha tsy fantatrao ny fomba fiasan'izy ireo, dia holazainay aminao izany amin'ny Ity lahatsoratra ity. Tafiditra ao koa ny kaody famaha 6 isa vaovao fa tsy efatra, toy ny teo aloha.
Misy zavatra mora alefa amin'ny Android mankany amin'ny iOS mora foana?
Apple dia manana fampiharana vonona antsoina "Mifindra amin'ny iOS" izay manamora ny fifanakalozana eo amin'ny sehatra Google mankany amin'ny Apple. Izahay efa nilaza taminareo ny momba azy ao Ity lahatsoratra ity.
Ahoana no fiantraikan'ity fanavaozana ity amin'ny bateriko?
Tokony hisy fiatraikany tsara izany, raha ny marina dia miantoka ny Apple fa amin'ny iOS 9 dia mety hitatra hatramin'ny 1 ora bebe kokoa ny androm-batana amin'ny fitaovana. Fa io kosa ankoatr'izay Apple dia nanolotra rafitra fitsitsiana bateria vaovao izay ahafahanao manery hatramin'ny adiny 3 fanampiny, mampihena ny CPU sy GPU rehefa ambany ny bateria, manalavitra ny fanavaozana ny zava-misy ary mampiato tanteraka ny AirDrop sy ny Continuity, ohatra.
Inona no atao hoe fanampiana mavitrika?
Tsy mila miandry anao intsony i Siri fa hametraka fanontaniana hanampy anao. Azonao atao ny mahalala hoe aiza ny toerana misy anao, ny ora isan'andro ary ny rindranasa ampiasainao andraso ny fangatahanao ary fantaro izay mety ilainao amin'izany fotoana izany, manolotra anao sosokevitra izay hianaranao mandritra ny fampiasanao ny iOS 9. Ka raha mampifandray ny sofinao ianao dia hanoro ilay rindran-kira izay matetika ampiasainao eo amin'ny efijery hidin-trano, na rehefa mampifandray ilay fiara tsy ampirim-tanana ny fampiharana podcast mampiasa ianao rehefa mandeha miasa. Rehefa miditra ao anaty fiara ianao amin'ny maraina, dia hanondro eo amin'ny efijery fanidiana raha hafiriana no andehanana vao hiasa arakaraka ny toe-piainan'ny fifamoivoizana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 9 » Izay rehetra tokony ho fantatrao momba ny iOS 9
Rafael Teran dia hoy izy:
Toa milay izany, saingy kely kokoa ny habaka noho ny fahatsiarovana voafetra ny fitaovana paoma.
Valiny tamin'i Rafael Terán
elkin gomez dia hoy izy:
tsy hoe nila toerana kely lavitra noho ny IOS 8?
Mamaly an'i elkin gomez
Sintomy ny Super Hexagon maimaim-poana noho ny fampiharana Apple Store
Fitaovana tohanan'ny iOS 9 Content Blockers